Fihaonan’ny mpikambana GV tany Beirota nokarakaraina manokana sy ireo fihaonana mahafinaritra maro hafa tsy nampoizina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2019 10:01 GMT
Tao anatin'ny iray tamin'ireo lahatsoratra nosoratako teto, nanoratra momba ny ahiahiko aho raha nangatahin'i Eddie mba hikarakara fihaonana GV any Beirota. Zava-manahirana, nampiahiahy … na izay tianao iantsoana azy. Ny zava-misy dia natahotra ny zavatra rehetra aho …
Afaka milaza ny fitarainako sy ny tabatabako noho ny tsy fahalalako izay tokony hatao sy izaho tsy te-hanao izany i Claire sy Gohary ary Afef…
Ary toy ny mahazatra dia nifanaiky tamin'ny daty iray izahay… izay nifanindry tamin'ny “Herinandron'ny Fandraharahana Manerantany” tamin'ny tapaky ny volana Novambra, izay mety hiantoka ny fanatrehan'ny olona marobe …
ary tsy i Claire sy Gohary ihany, fa i Amira, Afef ary olona maro hafa ho avy any Beirota koa hanatrika ny Forum momba ny Fitantanana ny Aterineto Arabo na IGF Arabo sy hetsika hafa.
Ary nanana ity hevitra mahafinaritra hafa ity aho … nitafatafa tamin'ny olon'ny March Lebanon momba ny Mozea vortoalin'ny Sivan'izy ireo aho …
Hanomboka manodidina ny sivana sy ny fahalalahana maneho hevitra ny fivoriana. Tapaka ihany ny daty ho an'ity nandrasana ela “Fifanakalozana Tsy Voasivana” ity: 26 Novambra. Azo jerena ato ny antontan-kevitra lehibe.
Saingy tsy izany ihany fa nisy koa fifandrifian-javatra mahafinaritra iray hafa nahatonga ahy hihaona tany Berlin, andro vitsy monja taorian'i Raphael, Pernille ary koa Solana sy Awadallah